Belmont Stakes Horse Racing in Elmont, N.Y.
ဒီတပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ရွေးကောက်ပွဲ (Election) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Shoo-in, Dark horse နဲ့ Favorite son တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
Shoo (ပါးစပ်ကနေ အသံလုပ်ပြီးတော့ ရှူးတိုက် မောင်းသွင်းတာ)၊ in (အထဲမှာ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အထဲကို ရှူးတိုက် မောင်းသွင်းလိုက်တာပေါ့။ ဒီနေရာမှာ Shoo-in ရဲ့  စာလုံးပေါင်း က ကြားမှာ hyphen (-) တုံးတို ခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဟာ မြန်မာမှာ ရှူးတိုက်ပေးတယ်ဆိုပြီး အသံလုပ်ပြီး ခြောက်သွင်းတာနဲ့ အဓိပ္ပါယ်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးဟာ မြင်းပြိုင်ပွဲကနေ ဆင်းသက်လာတယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းပြိုင်ပွဲတခုမှာ နိုင်စေချင်တဲ့မြင်းကို ရှေ့ ကနေ ပန်းဝင်နိုင်ဖို့ ကျန်ပြိုင်မြင်းတွေစီးတဲ့ ဂျော်ကီ (Jockey) တွေက မြင်းတွေကို လျှော့ပြေးခိုင်းလေ့ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ မြင်းတကောင် အနိုင်ရဖို့အတွက် တခြားပြိုင်မြင်းတွေစီးတဲ့ ဂျော်ကီတွေက ဝိုင်းပြီးဖန်ပေးကြတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းဆိုရင် ဒီ Shoo-in က မြင်းပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ တခုခု အကြံအဖန် လုပ်ထားတာမျိုးကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှူးတိုက် မောင်းသွင်း ရင်ပိုမြန်မြန်ပြေးအောင်လုပ်ပေးရာကျသလို၊ အနိုင်ရဖို့ကိုလည်းများစေတာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူဘဲအီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း ယှဉ်ပြိုင်ပွဲတခုမှာ နိုင်ခြေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ အနိုင်ရဖို့ သေချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရာထူးခန့်အပ်မှုတွေမှာ အခန့်ခံရဖို့ သေချာတဲ့လူ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရဖို့ သေချာတဲ့လူ၊ မြန်မာမှာတော့ “မိုးကျရွှေကိုယ်“ လိုမျိုး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အပိုင်နိုင်မယ်၊ လွယ်လွယ်နဲ့နိုင်မယ်၊ သေချာပေါက် နိုင်မယ်လို့တွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို Shoo-in လို့ ရည်ညွှန်းသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
He isashoo-in for re-election in his State.
သူကတော့ သူ့ပြည်နယ်မှာ ပြန်ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရဖို့ သေချာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ ဖြစ်တယ်။
(၂) Dark horse
Dark (မှောင်တာ၊ မည်းတာ၊ နက်တာ)၊ horse (မြင်း) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အမည်းရောင်မြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကလည်း မြင်းပြိုင်ပွဲကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ။ မြင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ အနိုင်ရမယ်လို့ တစ်ပေးခြင်း မခံရတဲ့မြင်းတွေကို Dark horse ရယ်လို့ ရည်ညွှန်းသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဆို အဲဒီမြင်းရဲ့  အရောင်က မည်းချင်မှ မည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမြင်းရဲ့  အရည်အသွေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြင်းလောင်းသူတွေက သိပ်မသိကြတာဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီမြင်း အပြေးမြန်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း သတင်းဟာ အမှောင်ကျနေတာကို ရည်ညွှန်းပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲတွေ၊ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့  အရည်အသွေးကို လူတွေကသိပ်မသိကြတာ၊တနည်း လူမသိသူမသိ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ၂၀၀၈ အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့  သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဘာရက် အိုဘားမား (Barack Obama) ဟာ ထိုစဉ်က သူ့ပါတီရဲ့  ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ သမ္မတကတော်ဟောင်းလည်းဖြစ်၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ ဟေလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) နဲ့စာရင် နိုင်ငံက သိပ်မသိကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူကို Dark horse ရယ်လို့ ထိုစဉ်က သတင်းမီဒီယာတွေက ရည်ညွှန်းပြောဆိုသုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Dark horse ရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က နိုင်ငံရေးလောကမှာတော့ အရည်အချင်းရှိပေမယ့် သိပ်မထင်ပေါ်တဲ့လူ၊ လူတွေသိပ်မသိကြတဲ့ မျက်နှာသစ်ဖြစ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ တနည်း ဘယ်သူကမှ နိုင်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The young lawyer is the dark horse to be the new Mayor of the city.
ဒီ လူငယ်ရှေ့ နေဟာ အဲဒီ မြို့ ရဲ့  မြို့ တော်ဝန်သစ်ဖြစ်ဖို့ အလားအလာအကောင်းဆုံးမျက်နှာသစ်တဦး ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Favorite son
Favorite (မျက်နှာသာ ပေးခံရတာ၊ အရေးပေးခံရတာ)၊ son (သား) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်က အရေးပေးခံရတဲ့ သား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အမေရိကန်စားလုံးပေါင်းက Favorite ဖြစ်ပြီး၊ ဗြိတိသျှ စာလုံးပေါင်းကတော့ Favourite ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ထောက်ပြလိုပါတယ်။ မြန်မာမှာတော့ မိသားစုတွေ ၊သားသမီးတွေကြား အမေ့အချစ်တော်၊ အဖေ့အသည်းစွဲ စသဖြင့်ရှိသလို၊ Favorite son ဆိုတဲ့ အီဒီယံအသုံးက အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဇာတိသား၊ နယ်ခံ ၊ မြို့ခံဖြစ်လို့ အဲဒီဒေသက လူတွေရဲ့  ထောက်ခံမှုကို ရရှိထားသူကိုရည်ညွှန်းသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်သိဖြစ်လို့၊ ကိုယ့်ဇာတိသားဖြစ်လို့၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာကို ပြန်အကျိုးပြုမယ့်လူဖြစ်လို့ မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနှင့် အဲဒီလိုမျိုး ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကို ထောက်ခံကြပြီး၊မဲပေးကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို Favorite son ဆိုပြီး လူကြိုက်များတဲ့လူရယ်လို့ ရည်ညွှန်းပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Hawaii considers Barack Obama its favorite son. He was born there.
Hawaii ပြည်နယ်က ဘာရက် အိုဘားမားကို သူတို့ဇာတိသားဖြစ်လို့ထောက်ခံကြတယ်။ သူက အဲဒီမှာ မွေးတာလေ။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့Election ကိုအခြေခံတဲ့အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတွေ Shoo-in, Dark horse နဲ့ Favorite son တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Election စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၃)